Hollow Cross Chikamu Plate Die Series - China Hollow Cross Chikamu Plate Die Series Mutengesi, Fekitori -Jwell
PC hollow ndiro yakashandiswa zvakanyanya muzvivakwa uye kushongedzwa. Iyo isina mhango grid ndiro inofa uye feedblock inogona kuita UV kudzivirirwa pamativi ese maviri. Kugadzirwa kwekupedzisira nehupamhi hwehupamhi hwe2100mm uye kuve nemhedzisiro yakasimba strengh, yakanaka yekudzivirira mamiriro ekunze uye UV kudzivirirwa. okumusoro nekudzika
chakuvhuvhu miromo, kugadzirwa ukobvu hama zvikanganiso zvinogona kudzorwa mukati me3%; Yakavakirwa-mukati heater maficha inopa nekukurumidza kupisa uye yepamusoro tembiricha chengetedzo Iyo yega mweya inogadziridza inogona kuita iwo mweya vhoriyamu yechikamu chimwe nechimwe kunyangwe iri nyore kudzora kuti iwedzere chigadzirwa chigadzirwa.
yeiyo chiteshi inosvika ku0.015- 0.03um, iyo inovimbisa kudzikira-humbowo.
Dhizaini dzakasiyana dzinogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvezvigadzirwa, yakajairwa polycarbonate mhango ndiro ine hukobvu iri pakati pe4 kusvika 25mm, akawanda-akaturikidzana ndiro senge H-muchinjiko chikamu, X-muchinjiko chikamu nezvimwe, ukobvu hwevamwe hunogona kusvika 36mm, uye iyo UV rukoko inogona zvemapuranga. Iyo PP, Pe isina mhango grid ndiro yakaburitswa neakasarudzika anofa ane mwero kurema, dampproof uye ane yakanyanya kukanganisa simba, iro rinoshandiswa zvakanyanya se
kushambadzira mwenje wepaneru, kuratidzira upholster, kutakura bhokisi nezvimwewo ukobvu-renji ndeye 2-12mm uye upamhi i1200-2200mm.
Iyo inotonhora vacuume calibrator inogadzirwa kubva kune yakanyanya kurapwa zvinhu inovimbisa yakanyanya kupfeka kuramba uye deformation-isina. Yakakosha tembiricha inodzorwa nzira yemvura uye vaccum calibration dhizaini inobvumidza tembiricha kugadzirisa kusangana nezvakasiyana zvepanyama zvivakwa zvezvinhu zvakasiyana.